CentOS Linux 6.10 iri pano neRetpoline-based mitigations yeSpecter V2 | Linux Vakapindwa muropa
Dare rekuvandudza CentOS rakazivisa iyo CentOS 6.10 kuwanikwa kwepamutemo, yekuvandudzwa kwazvino kuCentOS 6 akateedzana.
Kubva paRed Hat Enterprise Linux 6.10, CentOS Linux 6.10 inosanganisa nyowani yekuvandudza kuGCC (GNU Compiler Unganidzo) iriinopa retpolines kuchengetedza zvirinani vashandisi pamusiyano wechipiri weakakurumbira Specter kukuvadzwa iyo inobata mamirioni emakomputa nema processor epamazuva ano.
CentOS 6.10 inofungisisa zvakare gcc maraibhurari, clufter uye pacemaker mapakeji mukuburitswa kutsva, inovandudza iyo IP tafura masevhisi ekuverenga mafaira ekugadzirisa kubva ku / etc / sysctl dhairekitori, uye inogadziridza BHINDA nemudzi mutsva KSK yekubuditsa kunotevera kweDNSSEC Mudzi Wenharaunda Kiyi -Kusaina-Kiyi.
CentOS 6.10 inotorwa kubva kunowanikwa kodhi kodhi yakaburitswa neRed Hat Inc. yeRed Hat Enterprise 6.10. Misiyano yese yakasanganiswa kuita chinhu chimwe chete kuitira kuti zvive nyore kune vashandisi vekupedzisira. Iwo maseva, nzvimbo dzekushandira uye zvishoma kuisa zvichaita pasi peimwe chete repository. Zvese zveyedzo zvedu zvinoitwa mune ino yakasanganiswa repositori ”akataura Rich Bowen kubva kuCentOS timu.
Mapakeji akashaya uye madhiraivha muCentOS 6.10
Uyezve, madhiraivha mazhinji emahara akaputswa kusanganisira 3w-9xxx, 3w-sas, 3w-xxxx, aic7xxx, i2o, ips, megaraid_mbox, mptbase, mptctl, mptfc, mptlan, mptsas, mptscsih, mptspi, qla3xxx uye sym53c8xx izvo zvisisipo zvekuvandudzwa, pamwe nezvimwe maitirwo e megaraid_sas uye be2iscsi driver.
Kune rimwe divi, CentOS 6.10 inouya isina iyo python-qmf, python-qpid, qpid-cpp, qpid-qmf, qpid-bvunzo, qpid-maturusi, ruby-qpid uye saslwrapper mapakeji, TLS compression rutsigiro inobviswawo mupakeji NSS inodzivirira njodzi dzekuchengetedza.
Unogona tora CentOS 6.10 izvozvi pane 32-bit uye 64-bit makomputa kubva Iyi link. Vashandisi veCentOS vanogona kugadzirisa vhezheni yavo kuita 6.10 vachishandisa iyo yekuvandudza inosanganisirwa muchirongwa kana nekumhanyisa rairo "yum update”Mune terminal kana virtual koni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » CentOS Linux 6.10 iri pano neRetpoline-based mitigations yeSpecter V2
Zvinhu zvekuita mushure mekuisa Linux Mint 19 Tara